Common Cold အအေးမိရင် - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ကျမ အသက်(၃၂) အိမ်ထောင်မရှိပါဘူး။ ဆရာရှင့် နှာခေါင်းပိတ်ပြီး ဘယ်လိုမှအိပ်မရပါ။ နှာစေးတာ၅ရက်ရှိပါပြီ။ ဒီနေ့တော့အိပ်လို့မရအောင်ကို နှာခေါင်းပိတ်ပြီးအသက်ရှူကြပ်နေလို့ပါ ဆရာရှင့်။ သောက်ဆေးဖြစ်ဖြစ် တခုခု ညွှန်ပြပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်။ လေးစားအားကိုးလျှက်။
အအေးမိတာက အလာဂျီလိုဘဲ။ မတည့်တဲ့တာ ဗိုင်းရပ်၊ အမှုံအမွှားတွေက ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာရင် ဟစ်တမင်းဓါတ် ထွက်တယ်။ ဟစ်တမင်းတွေကို ဆန့်ကျင်မဲ့ အင်တီဟစ်စ်တမင်းဆေးတွေပေးရတယ်။ ဆေးလုံး၊ ဆေးရည်၊ နှာခေါင်းပန်းဆေး၊ မျက်စဉ်း၊ လိမ်းဆေးနဲ့ ထိုးဆေး အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အအေးမိတာနဲ့ တုပ်ကွေးကဆင်တယ်။ ဆေးပေးရတာလဲ တူတယ်။
(၁) Antihistamines အင်တီဟစ်စ်တမင်းဆေး၊
(၂) Decongestants ဒီကွန်ဂျက်စတင့်ဆေးတွေကို နှာခေါင်းမှာ ခံစားရတာတွေကို အမြန်သက်သာဘို့ သုံးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ အသက် သိပ်ကြီးသူနဲ့ သွေးတိုး ရှိသူတွေ မသုံးသင့်ဘူး။
(၃) Pain killers အနာ-အကိုက်သက်သာဆေး
အများကြီးရှိတယ်။ ဆေးသဘောချင်း မတူကြသလို နာပုံနာနည်းမတူရင် အနာသက်သာဆေးလဲ ရွေးပေးရတယ်။ ဘယ်လောက်နာသလဲအပေါ်နဲ့ အနာအမျိုးအစားအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။
1. Paracetamol (Acetaminophen) ပါရာစီတမော၊ (NSAIDs) စတီရွိုက်မပါတဲ့ အနာ-အရောင် သက်သာဆေးတွေ နဲ့ ဘိန်းသဘောပါတဲ့ဆေးတွေ ဆိုပြီးရှိတယ်။ Paracetamol မှာ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး သိပ်မရှိပါ။ ဆေးများသွားရင်တော့ အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်မှာ ဆိုးဝါးတာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Paracetamol နဲ့ Codeine လို ရောထားတဲ့ဆေးတွေလဲ ရှိတယ်။ Aspirin အက်စပရင်ကို အသက် ၁၆ နှစ်အောက်မပေးသင့်ဘူး။
2. Ibuprofen (Advil, Motrin, Nuprin) 200-400 mg ဆေးကလဲသက်သာစေမယ်။
(၄) Cough Syrups ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ
သတိပေးချက်တွေရှိပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေသာမက ထိရောက်မှုအတွက်ပါ မေးစရာတွေ ရှိတယ်။ Antitussive medicines အမျိုးအစားထဲမှာ အင်တီဟစ်တမင်း၊ dextromethorphan နဲ့ ကိုဒင်းတွေ ပါတယ်။ ကိုဒင်းဆိုတာ မူးယစ်ဆေးတမျိုးဖြစ်တယ်။ သူများနိုင်ငံမှာ ဆရာဝန် လက်မှတ်နဲ့သာ ရောင်းရတယ်။ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး အများစုထဲမှာ အရက်ပါသေးတယ်။ ချောင်းဆိုးတာကလဲ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ချောင်းခြောက်ဆိုးတာ၊ ချွဲထွက်ပြီးဆိုးတာနဲ့ ရင်ကျပ်ပြီးဆိုတာ။ ရောဂါအလိုက် ရွေးရမယ်။ Expectorant ချွဲရှိနေသူတွေကိုပေးတာက ချွဲကိုတမင် ထွက်အောင် လုပ်ပေးတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ ချွဲဆိုတာ အထဲမှာရှိနေရင် ထွက်လာမှ ကောင်းတယ်။ လည်ချောင်းယားလို့ ဆိုးတဲ့သူကို အဲလို ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး မပေးရပါ။ ချောင်းဆိုးစေတဲ့အကြောင်းတွေက မတူပါ။ ရာသီဥတုကြောင့် ဖြစ်တာက များတယ်။ အလာဂျီအတွက် သောက်ဆေးကို ပိုအားကိုးရတယ်။
အအေးမိရင် ဆေးမပါဘဲ သက်သာဆေစတဲ့နည်းတွေရှိတယ်။ ကောင်းကောင်းအနားယူပါ။ ရေ-အရည် များများ သောက်ပေးပါ။ ဆားရည်ခပ်နွေးနွေးနဲ့ ပလုပ်ကျဉ်းပါ။ အအေးမိတာအတွက် အသင့်ပေါင်းစပ်ထားပြီးသားဆေးတွေက အမျိုးအမည်အတော်များတယ်။ (နှာရည်ယိုတာ + နှာခြေတာ + လည်ချောင်းယားတာအတွက်ဆေး)၊ (အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး + ကိုယ်ပူကျဆေး)၊ (ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး) ရောထားတာတွေဖြစ်တယ်။ Cold tablet, Sneeza, No-Cold, M Cold, Coricidin စတဲ့နာမည်တွေနဲ့လာတယ်။ ခပ်ဆင်ဆင်တွေဖြစ်တယ်။ အိပ်ချင်တာကိုသတိထားပါ။